क्रिएटिनिन स्तर: रक्त परीक्षण, सामान्य दायरा, र कसरी स्तरहरू कम गर्ने - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
समुदाय समुदाय, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> क्रिएटिनिन: रक्त परीक्षण, सामान्य दायरा, र कसरी स्तरहरू कम गर्ने
क्रिएटिनिन: रक्त परीक्षण, सामान्य दायरा, र कसरी स्तरहरू कम गर्ने
तपाईं आफ्नो अपरान्ह रनको दुई माईलमा हुनुहुन्छ, वा बेन्चमा तेस्रो सेट मार्फत पावरिंग गर्दै, वा बाइक चढाउनुहोस् तपाईंको दैनिक कम्युटमा। तपाईं छिटो सास फेर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईंको मांसपेशीहरू आगोमा छन्। तपाईंको छालामा पसीनाले ड्रिप्स तातोले तपाईको गालामा पछाडि फ्याँक्यो। र जब तपाइँ सक्नु हुन्छ, तातो नुहाउने, चिसो पानीको गिलास र सोफेमा भएको सिट भन्दा राम्रो अरू केही लाग्दैन।
धेरै व्यक्तिहरू जस्तै, तपाईं शारीरिक गतिविधि कसरी आफ्नो शरीर बनाउँछ कसरी को बारे मा सजग हुनुहुन्छ feel— सास फेर्दै, पसिना र तातो। तपाईं यो मा फस्टाउन पनि सक्छ। तर सतह मुनि केहि बढि भइरहेको छ। जब तपाईको मांसपेशिहरु व्यायामको बखत बिग्रन्छन्, तिनीहरू बिस्तारै पुन: निर्माण गर्दछन् र मांसपेशीहरूको संख्या बढाउँछन्, तर यस प्रक्रियाले तपाईको रगतमा फोहोर उत्पादनहरू पनि जारी गर्दछ, मुख्य रूपमा क्रिएटिनिन।
जबकि यो तपाईंको अन्तिम चीज हुनसक्दछ जब तपाईं आफ्नो माईल टाइम गर्दै हुनुहुन्छ वा एक-रिप म्याक्समा थिच्दा, तपाईंको रगत क्रिएटिनिन स्तर तपाईंको रेनल स्वास्थ्य र मृगौला समारोहको प्रमुख सूचक हुन सक्छ।
क्रिएटिनिन भनेको के हो?
सबैको रगतमा केहि सीरम क्रिएटिनिन स्तर हुन्छन्। क्रिएटिनिन मांसपेशी प्रयोगको एक प्राकृतिक उप उत्पादक हो, क्रिएटिन भनिने रासायनिक बिच्छेदनको कारण। क्रिएटिनिन आफैंमा एक विशिष्ट शारीरिक क्रियाकलाप छैन - यो केवल बेकारको उत्पाद हो। मिर्गौलामा पुग्दा सम्म यो रगतमा रहन्छ, जहाँ यो फिल्टर गरिएको छ र पिसाब मार्फत हटाइएको छ।
त्यसो भए कसरी तपाईंको शरीरले क्रिएटिनिन उत्पन्न गर्दछ? यो क्रिएटिनबाट सुरू हुन्छ, जुन मिर्गौला, अग्नाशय, र कलेजोमा संश्लेषित हुन्छ, त्यसपछि रगत प्रवाहको माध्यमबाट ढुवानी गरिन्छ र तपाईंको कंकाल मांसपेशीहरूमा भण्डारण हुन्छ। श्रमको बेला, तपाइँका मांसपेशीहरूले क्रिएटिनिनलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ, जसले मांसपेशियोंको संकुचनमा मद्दत गर्दछ। यसको उद्देश्य पूरा गरिसकेपछि, क्रिएटिन क्रिएटिनिन हुन्छ र फेरि रक्तप्रवाहमा किडनीमा प्रवेश गर्दछ।
जे होस् क्रिएटिनिनले सक्रिय रूपमा तपाईको शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन (वा नोक्सानी पुर्‍याउँदैन), तपाईको रगतमा क्रिएटिनिनको मात्रा तपाईको मिर्गौला स्वास्थ्यको मूल्यांकन गर्न मापन गर्न सकिन्छ। यस कारणले गर्दा, चिकित्सकहरूले अक्सर क्रिएटिनिन परीक्षण प्रयोग गर्छन् - साथै अन्य प्रयोगशाला परीक्षणहरूको साथ, रगत यूरिया नाइट्रोजन (BUN) परीक्षण chronic दीर्घकालीन किडनी रोग (सीकेडी) वा रेनल बिफलताको निगरानी गर्न।
राम्रो क्रिएटिनिन स्तर के हो?
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, स्वस्थ मिर्गौला भएको कसैको लागि सीरम क्रिएटिनिन (रगतमा फेला पर्दछ) को लागि सामान्य दायरा हो वयस्क पुरुषहरूको लागि ०.9 देखि १.3 मिलिग्राम प्रति डिलिटर र वयस्क महिलाहरूको लागि प्रति डिसीलिटर ०..6 देखि १.१ मिग्रि ।
जे होस्, क्रिएटिनिनको स्तरहरूमा आउँदा धेरै चरहरू हुन्छन्। सामान्य केही हदसम्म व्यक्तिपरक शब्द हो। मांसपेशी विघटन क्रिएटिनिन सिर्जना गर्दछ, त्यसैले तपाइँको मांसपेशी जन र गतिविधि स्तर तपाइँको रगत मा राशि को प्रभाव गर्न सक्दछ। रक्त क्रिएटिनिन स्तर सटीक मापन गर्न डाक्टरले आधारभूत संरचना स्थापित गर्न यी विभिन्न कारकहरूको मूल्या first्कन गर्नेछ, टेलर ग्राबर, एमडीका अनुसार एनेस्थेसियोलोजिष्ट र संस्थापक ASAP IVs । क्रिएटिनिन स्तर मूल्या्कन जनसांख्यिकीय आधारभूत रेखा नै 'सामान्य स्तरहरू' के हुनुपर्दछ भनेर मूल्या getting्कन गर्न सुरु हुन्छ, डा। ग्रेबर भन्छन्। यो उमेर, जाति, लि gender्ग, र शरीरको आकारमा निर्भर गर्दछ। एक पटक यी मानहरू सामान्यीकृत भएपछि, यस दायराबाट आएका परिवर्तनहरूले मृगौलाको असामान्यतालाई दर्शाउँदछ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू विभिन्न कारणका लागि क्रिएटिनिन स्तरहरूमा नजर राख्न चाहन्छन्। यदि तपाईंसँग हाल मृगौला रोग, मृगौलाको क्षति, मधुमेह, वा अर्को रोग हो जसले तपाईंको मिर्गौलालाई असर गर्दछ, वा तपाईंको किडनीलाई असर गर्ने औषधी लिइरहनुभएको छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंको रेनल कार्यको अनुगमन गर्न नियमित क्रिएटिनिन मापन आदेश दिन सक्दछ। सब भन्दा साधारण परीक्षण विधिहरू रगत र मूत्र मार्फत हुन्।
तपाईंको रगतबाट आउने क्रिएटिनिनलाई सीरम क्रिएटिनिन भनिन्छ, र यसलाई नियमित रक्त परीक्षणको प्रबन्ध द्वारा मापन गर्न सकिन्छ। जब किडनीको कार्य बिग्रेको छ, कम क्रिएटिनिन खाली गर्न सक्षम छ, रगतमा क्रिएटिनिनको एक उच्च स्तरको परिणामस्वरूप, डा। ग्राबर बताउँदछन्। जबकि यो परिक्षणले तपाईलाई सिधै बताउँदैन कि मिर्गौलाले कति राम्ररी काम गरिरहेको छ, परिवर्तनका लागि यो समय अनुसार पछ्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले यो प्रयोग गर्न सक्दछन् क्रिएटिनिन रक्त परीक्षण (उमेर, लिंग, जाति, आदि जस्ता कारकहरूको साथ) तपाईंको ग्लोमेरूलर फिल्टरेशन दर (GFR) गणना गर्न जुन किडनी असफलता वा दीर्घकालीन किडनी रोगको निदानको लागि महत्वपूर्ण छ।
क्रिएटिनिन स्तरहरूको परीक्षण गर्नका लागि सबै भन्दा साधारण तरीका भनेकोa२-घण्टा युत्र संग्रह । २ 24 घण्टा किन? व्यायाम, आहार, र हाइड्रेसनले सबै क्रिएटिनिनलाई असर गर्न सक्छ, त्यसैले तपाईंको स्तरहरू दिनभरि नै अस्थिर हुन सक्छ। तसर्थ, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई मल्टिपल मूत्र नमूनाहरू आवश्यक पर्दछ तपाईंको क्रिएटिना क्लीयरन्स प्रभावकारी रूपमा मूल्यांकन गर्नुहोस् । तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यस परीक्षणमा २ ur घण्टा भन्दा बढी तपाईंको सबै पेशाब स collecting्कलनमा समावेश छ, त्यसपछि यसलाई तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई डेलिभर गर्ने। परिणाममा आधारित, तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकले निर्धारण गर्न सक्दछ कि तपाईंको मिर्गौलामा क्रिएटिनिन कसरी मूत्र पथमा फिल्टर गर्दैछ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले तपाईंको अनुमानित GFR (eGFR) लाई पेशाब क्रिएटिनिनको उपस्थितिसँग तुलना गरेर तपाईंको मिर्गौलाको कार्यमा विस्तृत हेराई दुवै परीक्षणहरूको आदेश दिन्छ। यदि तपाइँको डाक्टरले मृगौलाको रोग वा क्षतिको शंका गर्दछ भने, तिनी वा उनीले रगत यूरिया नाइट्रोजन (BUN) परीक्षणको लागि पनि उनीहरुको निदान पुष्टि गर्न सक्छन्। यो परीक्षणले यूरिया नाइट्रोजनको मात्रा मापन गर्छ - किडनीले फिल्टर गरेको अर्को प्रकारको फोहोर - रगतको नमूनामा।
असामान्य क्रिएटिनिन स्तरको मतलब के हो?
त्यसोभए, तपाईं डाक्टरको नजिक जानुभयो, परीक्षण गर्नुभयो, र नतिजाहरू निम्नमा छन्: तपाईंसँग क्रिएटिनिनको उच्च स्तर छ। अब के? एक चरण - नडराउनुहोस्। उन्नत क्रिएटिनिनको मतलब यो होइन कि तपाईंको मिर्गौला तलतिर घुमाइएको छ। सामान्य दायरा बाहिरको जुनसुकै कुरा (वयस्क पुरुषहरूको लागि ०.3 देखि १. per मिग्रि प्रति डिसीलिटर र वयस्क महिलाहरूको लागि ०..6 देखि १.१ मिलिग्राम प्रति डिसीलिटर) स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले थप अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर जहिले पनि खतरा हिज्जे छैन।असंख्य कारकहरूले तपाईंको परीक्षण परिणामहरूलाई असर गर्न सक्दछ। यहाँ केहि थोरै छन्:
व्यायाम: के तपाई फिटनेस किकमा हुनुहुन्छ? जिम प्रत्येक दिन? मांसपेशीहरु को टूट मा यो spike क्रिएटिनिन को उत्पादन को वृद्धि हुनेछ।
बढेको प्रोटीन खपत: पकाएको मासुमा क्रिएटिनिन हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं प्रत्येक रात स्टीक र भुटेको कुखुरामा खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं उच्च स्तर देख्न सक्नुहुनेछ।
मूत्र पथ अवरोध: यदि तपाईं पेशाब गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंको शरीरले क्रिएटिनिन हटाउन सक्दैन, त्यसैले किडनी ढु and्गा र अन्य मूत्र अवरोधहरूले यसलाई तपाईंको रक्त प्रवाहमा रहन अनुमति दिनेछ।
केहि औषधिहरू: कहिलेकाँही, लागूपदार्थ पनि अपराधी हुन सक्छ। एन्टिबायोटिक trimethoprim (ट्राइमेथोप्रिम कुपनहरू भेट्टाउनुहोस् | trimethoprim विवरणहरू) रCimetidine (Cimetidine कुपन खोज्नुहोस् | Cimetidine विवरण), पेटको अल्सर र ईर्ष्यालु औषधि, क्रिएटिनिन स्राव रोक्न सक्छ । कहिलेकाँही, गैर-स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी), जस्तै आईबुप्रोफेन, पनि यसको कारण हुन सक्छ।
उच्च रक्तचाप: अध्ययन पनि देखाइएको छ त्यो उच्च रक्तचाप, मुटुको असफलता, र अन्य मुटुको सर्तले क्रिएटिनिन स्तर बढाउन सक्छ।
त्यस्तै, कम क्रिएटिनिन सधैं खतरनाक हुँदैन। यो कम मांसपेशीहरूको समूह (वा मांसपेशि डिस्ट्रोफी जस्ता मांसपेशी रोग), गर्भावस्था, कम प्रोटीन आहार, वा केही कलेजोको अवस्थाको परिणाम हुन सक्छ।
के क्रिएटिनिन स्तर द्रुत रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ?
क्रिएटिनिन स्तर द्रुत रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ, दिनभरि नै, किन कि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले उनीहरूलाई लामो समय अवधिमा निगरानी गर्छन्। रगतमा उच्च क्रिएटिनिन फिर्ता गर्ने एक रक्त परीक्षण फ्लूक हुन सक्छ। यद्यपि, माथिल्लो स्तरहरू देखाउने प row्क्तिमा धेरै परीक्षणहरूले पुराना किडनी रोगलाई संकेत गर्न सक्दछ। क्रिएटिनिन स्तरमा अचानक स्पाइक तीव्र किडनी क्षति वा लक्षणहरूको आधारमा अन्य सर्तहरूको लागि चेतावनी संकेत हुन सक्छ।
क्यान्सर र क्रिएटिनिन स्तर बीचको सम्बन्ध के हो?
असामान्य क्रिएटिनिन स्तरले पनि मिर्गौला वा प्रोस्टेट क्यान्सरलाई संकेत गर्न सक्दछ। जे होस्, उच्च वा कम क्रिएटिनिन आफैले यसको मतलब यो हुँदैन कि तपाईंलाई क्यान्सर छ।
तपाईं कसरी रगतको प्रकार थाहा पाउन सक्नुहुन्छ
कसरी क्रिएटिनिन स्तर कम गर्ने
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले कसरी तपाईंको अनौंठो क्रिएटिनिन स्तरहरूको व्यवहार गर्दछ सम्पूर्ण रूपमा अन्तर्निहित कारणमा निर्भर गर्दछ। जीवनशैली र आहारमा परिवर्तन सामान्य मामिलाहरूको लागि सरल र प्रभावकारी उपचार हुन सक्छ। तर पुरानो मिर्गौला रोग, मृगौला बिग्रिनु, वा मिर्गौलामा असफलतालाई अझ प्रबल प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्दछ। लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न औषधी, डायलिसिस, वा अत्यन्त चरम अवस्थामा, मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट आवश्यक हुन सक्छ। क्रिएटिनिन स्तर कम गर्नका लागि यहाँ केहि सम्भावित तरिकाहरू छन्:
प्रोटीन सेवन घटाउनुहोस्
जोरदार गतिविधि घटाउनुहोस् (तर अभ्यास पूर्ण रूपमा कटौती नगर्नुहोस्!)
तपाईंको आहारमा अधिक फाइबर पाउनुहोस् (विशेष गरी फल र तरकारीबाट)
क्रिएटिनिन पूरकहरू वा अन्य फिटनेस पूरक
उच्च सोडियम प्रशोधित खाद्य पदार्थ
Chitosan पूरक रेनल स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ
साल्विया एक परम्परागत चिनियाँ औषधि हो मिर्गौला रोग को लागी
हरियो चिया वा हर्बल चिया — विशेष गरी स्टटलि net नेटल, क्यामोमाइल, जिन्से, र डान्डेलियन जरा
त्यहाँ कुनै औषधीहरू छैनन् जुन तपाईंको रगतमा क्रिएटिनिनको मात्रा कम गर्दछ। यदि एक डाक्टरले मृगौलाको रोगले असामान्य क्रिएटिनिनको स्तर निम्त्याउँछ भन्ने निर्धारण गर्दछ भने, उसले लक्षणहरूलाई कम गर्न औषधी दिन सक्छ। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स समावेश:
Angiotensin- रूपान्तरण एंजाइम (ACE) अवरोधकर्ताहरू जस्तै लोटेंसिन (बेनाजेप्रिल) र क्यापोटेन ( क्याप्टोप्रिल ) लाई तल्लो उच्च रक्तचाप ।
Angiotensin II रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबी) जस्तैएडर्बी(azilsartan) र Teveten (Eprosartan) ले उच्च रक्तचापको उपचार गर्दछ र तपाईंको मूत्रमा प्रोटिनको मात्रा कम गर्न सक्छ।
एरिथ्रोपोइजिस-उत्तेजक एजेन्ट (ESAs) तपाइँको रातो रक्त कोष गणना बढाउन मद्दत गर्न।
फास्फेट वा पोटेशियम बाइन्डर अतिरिक्त फस्फेट र पोटासियम हटाउन मद्दतको लागि जुन तपाईंको मिर्गौलाले फिल्टर गर्न सक्दैन।
सम्बन्धित : लोटेंसिन विवरणहरू क्यापटोप्रिल विवरणहरू
अन्तमा, मिर्गौला समारोह अनुकूलनको लागि उत्तम चिकित्सा सल्लाह भनेको निरन्तर स्वस्थ जीवनशैली बिताउनु हो। डा। ग्राबर भन्छन्: प्रशोधित सामग्रीहरुमा उच्च अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ न्यूनतम गर्ने, फलफूल र तरकारीको मात्रा बढाउने, नियमित व्यायाम (मध्यम गहनता को १ 150० मिनेट वा जोडदार तीव्रता एरोबिक व्यायाम प्रति मिनेट प्रति हप्ता), हाइड्रेटेड रहन, र शरीरको वजन एक मा कायम राख्न स्वस्थ दायरा (२० देखि २ of को बडी मास इन्डेक्स) भनेको शरीरलाई सफल हुनको लागि आवश्यक टूलहरू दिइरहनुभएको छ भनेर निश्चित गर्न समयको लागि ध्यान केन्द्रित गर्ने चीजहरू हुन्।
सुमात्राइप्टन साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
Vaping तथ्या 20्क 2021
हाइड्रोकोडोन एसिटामिनोफेन -3--3२ vs बनाम ऑक्सीकोडोन
फ्लूको साथ तपाईबाट कति टाढा रहनु पर्छ
असुरक्षित सेक्स पछि कति समय लाग्छ म योजना लिन सक्छ b
जनसंख्या कति मोटो छ
दिनहुँ बेनाड्रिल लिने दुष्प्रभाव
एलर्जी ले तपाईंलाई कम ग्रेड ज्वरो दिन्छ